Dharka Dharka Salafka ee Saladda Sare ee Miisaanka Maansada - Rebates Fitness
Home » blog » Waxyaabaha ay ka kooban yihiin Dharka Salafka ee Miisaan culus
Maqaalka, waxaan ku falanqaynaynaa waxyaabaha ugu wanaagsan ee saladhyada saladhka loogu talagalay miisaanka oo yaraada oo aan la wadaagno talo bixinno ku saabsan waxa ay ka kooban tahay waxyaabaha aad u isticmaali karto saladhyadaada si ay gacan uga geysato kor u qaadidda dheef-shiid kiimikaadkaaga.
Tilmaamahaani waxay ka yimaadeen Cunno kariyeyaasha qorayaasha Dave Ruel & Karine Losier.
Halkan waxaa ah cuntooyinka saladhka caafimaadka leh ee aad isticmaalikarto:
Dhamaan Dijon mustard dabiiciga ah ayaa runtii saameyn weyn ku yeelan kara habka dheef-shiid kiimikaadkaaga, xitaa nasashada, iyo sidoo kale hagaajinta dheefshiidka guud ee cuntada iyo isticmaalka nafaqada.
Apple Cider Vinegar wuxuu ka caawiyaa culeyska culeyska asaga oo ka saaraya beerka, kordhinta habka dheef-shiid kiimikaadka, iyo kor u qaadidda heerarka gaajada!
Khamri Caddaan iyo Red Khamri ayaa la muujiyay si kor loogu qaado heerarka sonkorta dhiigga, yareynta insulin sidoo kale dheefshiidka cuntada.
Hadday taasi ku filnaynna, dhir kale iyo dhir udgoon sida sinjibiil, toon, liin, cayenne, thyme, basil, iyo dhir ayaa runtii dhammaantood la muujiyey inay leeyihiin waxyaalo dheef-shiid kiimikaad sarreeya sida ay kicinayaan dhadhankaaga kabaha!
Xaqiiqdu waa, markaad barato sida wax loogu karsado waxyaabaha ku habboon, waxaad runtii bilaabi kartaa inaad ku raaxaysato labadaba guryaha gubanaya iyo dhadhanka ugu dambeeya ee cuntooyinka aad u isticmaasho si aad u jilciso dhexdaada.
Waa maxay sida saxda ah waxa ay Dave iyo Karine dhab ahaan ku soo urursadeen taxanaha cuntada ee "Metabolic Cooking" - in ka badan 250 suxufi oo tayo sare leh, oo dufanno baabi'iya oo aad ka soo qaadan karto. Iyo dabiici ahaan, waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo dheef-shiid kiimikaad sarreeya oo kor u qaada cuntada sida loo kala dooran karo!
Halkan ka hubi:
250+ Savory Metabolic Cunto Cunidda <——- Dhaqso & Fudud!